Dastabej » ‘म तरकारीवाला’
‘म तरकारीवाला’ – Dastabej
किसानके लिए आए सहयोग पावरवाला लोग लेठैै ।’
बाँके— कति बेला विहान हुन्छ र खेतमा काम गर्न जाउँला ?, तरकारी बिक्री गर्न नेपालगन्ज पुग्न भिन्सहरै उठ्नै पर्यो । तरकारी बिक्री गरे पैँसा आउँछ । यो दैनिकी हो, बाँके डुडुवा गाँउपालिका ६ कालाबन्जरका किसान मंगल गोडियाको । उनी करिब एक दशकदेखि तरकारी खति गर्दै आएका छन् ।
उनीसंग कट्ठा जमिन छ । त्यसैमा व्यवासयिक तरकारी खेती गरेर १० जना परिवारको घर खर्च धन्दै आइरहेका छन् । उनले उत्पादन गरेको तरकारी नेपालगन्जको रानी तलाऊ तरकारी बजारमा बिक्रि गर्दै आएका छन् । ‘गर्न सके असम्भाव हुँदैन । मिहनेतले थोरै जग्गामा आम्दानी गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
उनलाई काम गर्नका लागि सानो भाई लगायत सबै परिवारले सघाउने गर्छन् । उनी तरकारी उत्पादन गरेर बजारमा आफै बिक्रि गर्न दैनिक करिब १० किलोमिटरको यात्रा साईकलमा गर्ने गर्छन् । उनी सिजन अनुसार हरेक किसिमका तरकारीहरु उत्पादन गरेका हुन्छन् । तर व्यवसायिक खेती गर्ने यि किसानसम्म सरकारी आँखा पगुेको छैन । किन ? ‘हामीजस्ता सानो किसानलाई कसले हेर्ने हो र ? ’ उनी सहजै भन्छन्,‘किसानके लिए आए सहयोग पावरवाला लोग लेठैै ।’
१४ मंसिर २०७७, आईतवार ०८:१८ प्रकाशित